Iphrofayili yoMhluleli oBulala uCarlie Brucia
Umntwana uthathwa kwiVideotape
NgeSonto, ngoFebruwari 1, 2004, eSarasota, eFlorida, uCarlie Jane Brucia oneminyaka eli-11 ubudala wayesekhaya esuka kumkhonto womngcwabo endlwini yomhlobo wakhe. Uyise wakhe, uSteve Kansler, wayesendleleni yokumkhetha, kodwa akazange amfumane. UKarlie, enqumle ukugawula imoto ekuhlambulukanga kude nekhaya lakhe, wadibana nendoda kwaye wahokelwa kude, akaze abonakale ephila kwakhona.
Ikhamera yokulinda kwinqwelo yemoto yabonisa indoda ephethe i-shirt efana neyayifinyelela uCarlie, isithi into ethile kuye, ize imlandele.
I-NASA, kunye nekhnoloji esetyenziswe kuphando lweNkcazo ye- Space Shuttle Columbia , incedise uphando ngokusebenza nevidiyo ukuphucula umfanekiso. I-FBI nayo isebenza ekuncedeni ukufumana uBrucia kunye nendoda eyamthatha.
Emva kokufumana iingcebiso malunga nokuchongwa kwalowo ndoda, amaphoyisa aseSarasota abuza uJoseph P. Smith, owayegcinwe eboyeni lokungahlawulwanga ngokungahambisani ne-parole ukusukela emva kokuba uCarllie abanjwe. Ibhinqa elathi lahlala noSmith laliyinye yalaba bantu abaqhagamshelana namapolisa. USmith akazange avume ukuba nayiphi na inxaxheba kukaCarlie Brucia.
Ngo-Februwari 6, kwaziswa ukuba umzimba kaCarlie Brucia ufunyenwe. Wayebulewe kwaye washiywa kwindawo yokupaka isonto nje kwiikhilomitha ukusuka ekhaya.
UJoseph Smith, oneminyaka engama-37 ubudala wemoto yemoto, kunye noyise wesithathu obanjwe amaxesha alishumi elinesithathu eFlorida ukususela ngo-1993, kwaye wayekade ehlawulwa ngokubanjwa nokuthunjwa kwamanga, wayegcinwe esitokisini njengoko umsolwa obalulekileyo ekubulaleni uCarlie Brucia.
Ngomhla ka-Februwari 20, uSmith wasolwa ngokubulala nokubulala amacala athile ekuthunjweni kunye nebhetri yezocwangciso zentlobano yecala elaliswa yiofisi yommeli waseFlorida.
Ngethuba lokulingwa , ijaji yabona i-videotape kwaye yakuva ubungqina kumangqina amaningana athi bawaqonda i-Smith xa bebona ividiyo kwi-TV.
Ividiyo nayo ithatha iittoti kwiNtshonalanga yengalo, eyafunyanwa ngexesha lovavanyo.
I-videotape ayingekho kuphela u bungqina obudibana noSmith kulwaphulo-mthetho. Ubungqina be-DNA obuboniswe ukuba inambuzane ekhethiweyo ifunyenwe kwiimpahla zentombazana ezifana neSmith.
Ijaji nayo yakuva ubungqina obuvela kumntakwabo kaSmith, uJohn Smith, owamkhokela ngamapolisa isidumbu sikaCarlie kufuphi nebandla emva kokuba umntakwabo avume ulwaphulo-mthetho kuye ejele. Watshela i-jurors ukuba umntakwabo wamxelela ukuba unesondo elibi kunye nentombazana eneminyaka engu-11 ubudala, uSarasota ngaphambi kokuba amqhekeze afe. Waphinda wangqina ukuba wayemtholile umzalwana kwividiyo ebonisa ukuba uCarlie wayekhokelwa ngumntu emva kokuhlamba imoto.
Ngethuba lokuvala umtshutshisi uCraig Schaeffer, wawakhumbuza ama-jurors e-videotape ebonisa uSmith ohola uCarllie Brucia, kunye no-Smith's DNA efunyenwe kwihembe lakhe kunye neentambo zokumkela ukuba wambulala. "Sazi njani ukuba lo mntu ubulale uCarlie?" USchaeffer wabuza abagwebi. "Wasitsho."
Ummeli we-defense wen Smith wamangalisa inkundla xa enqabile ukunika ingxelo yokuvala. "Inkolelo yakho, isiluleko esichasayo, amalungu ejaji , siyayeka ukuvala ingxabano," kusho uAdam Tebrugge.
Ngo-Oktobha 24, 2005, iJaji yaseSarasota, eFlorida yathabatha ixesha elingaphantsi kweeyure ezithandathu ukuba ifumene uJoseph P. Smith unecala lokubulala, ukubetha ibhetri kunye nokuthunjwa kukaCarlie Brucia.
NgoDisemba 2005, ijaji yavotela i-10 ukuya kwe-2 kwisigwebo sokufa.
Ngexesha lokuvalelwa ngoFebruwari 2006, uSmith wakhala ngelixa exolisa enkundleni ngokubulala uBrucia waza wathi uzame ukuzibulala ngokuthatha i-heroin kunye ne-cocaine ngosuku lokubulala. Kwakhona wabuza ijaji ukuba ayilondoloze ubomi bakhe ngenxa yentsapho yakhe.
Ngo-Matshi 15, 2006, uMgwebi weNkundla yeSekethe u-Andrew Owens wagweba uSmith ukuba aphile entolongweni ngaphandle kokubanjelwa inkululeko yokuhlaselwa nokuthunjwa.
"UCarlie wanyamezela umonakalo ongenakwenzeka, owaqala ngexesha lokuthumba kwakhe," u-Owens uthe ngaphambi kokugwetywa. "Umfanekiso wommangalelwa uthatha ingalo yakhe kwaye ihamba naye ngokungathandabuzekiyo iya kugxininiswa kwiingqondo zethu ngonaphakade ... Ngethuba lokuxhatshazwa ngokwesondo nangokwenyama, uCarlie waxhomekeka, eneminyaka eyi-11 ubudala, akungabazeki ukuba wayeyazi yeengxaki zakhe kwaye wayenethemba elincinci lokusinda ... Ukufa kwakhe kwakungekho nto kwaye kwakungekho nto ...
kubalwa kwaye kulungiswe. "
Emva koko wamgweba uJames P. Smith ukuba abulawe ngumjovo obulalayo .
Isitrafti seMonkey Family
Icala lika-Eric Rudolph: I-Olympic Park Bomber
Ukufumana i-Patterns ye-Bolt Pattern
Shizukani - Iimpawu zeJapan ezilula
IYunivesithi yase-Richmond Admissions
Umdlalo wePlayer Primer
Izindlela zokuBaliswa kwiBhola
Oomama abaDumileyo kunye neNtombi eMbali
USeptemba Omnyama kunye noBulala abangama-11 bama-Israyeli kwi-Olympics yase-Munich ngowe-1972
Isikhundla se 'Nicht' kwizivakalisi zesiJamani
Uncedo Ukufumana Abafundi Bakho Baxhomekeke Kuvavanyo Lwabo Olulandelayo NgeMidlalo emi-5
10 IiLithium Facts
Umboniso weCédez kuMculo
Amazwi angama-100 awona mfuneko kakhulu ngesiNgesi
Imiqobo yokuzisa abantu kwi-Mars
Iingoma ezi-10 eziphezulu zeT Tom ezinama-80s
Iphrofayili yeAres, isiGrike uThixo weMfazwe